शीर्ष व्हीलचेयर समीक्षा | KarmanHealthcare.com
गुगल समीक्षाहरु हेर्नुहोस् एक समीक्षा छोड्नुहोस्
शीर्ष व्हीलचेयर तपाइँ द्वारा समीक्षा!
Google र Yelp मा
तल गूगल द्वारा फिल्टर वास्तविक प्रयोगकर्ता समीक्षा को एक सूची हो। वास्तविक खरीददारहरु र उनीहरु के भन्न चाहन्छन्। हामी जस्तै साझेदारहरु द्वारा सबै समीक्षा मा भरोसा गर्दछौं GOOGLE, चिल्लो, र अमेजन। केवल सम्मानित वास्तविक खरीदारहरु कि विश्वसनीय स्रोतहरु को माध्यम बाट प्रमाणित गरीन्छ विचार गरिनु पर्छ। हो, दुबै राम्रो र नराम्रो तपाइँ समुदाय र खरीदारहरु र हाम्रा उत्पादनहरु र सेवाहरु का प्रयोगकर्ताहरु द्वारा प्रतिनिधित्व गरिनेछ। हामी तपाइँको विचार को लागी अग्रिम धन्यवाद दिन्छौं। We शक्ति को विभिन्न प्रकार को सैकड़ों प्रदान गर्दछ र म्यानुअल व्हीलचेयर कि धेरै फरक शर्तहरु को लागी एक प्रयोगकर्ता हुन सक्छ कि पूरा गर्नुहोस्। साथै, म्यानुअल व्हीलचेयर उच्च को एक ठूलो चयन शामिल छ गुणस्तर कुर्सियों कि मूल्य मा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी छन्। फलस्वरूप, we को धेरै फरक वर्गहरु बोक्न व्हीलचेयर, तपाईंको अवस्थाको आधारमा तपाईंले आफ्नो जीवनशैलीसँग मिल्ने एउटा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। साथै, हामी प्रदान गर्दछौं यातायात व्हीलचेयर, मानक व्हीलचेयर, हल्का व्हीलचेयर, अल्ट्रा हल्का व्हीलचेयर, एर्गोनोमिक व्हीलचेयर र धेरै अन्य। Manual व्हीलचेयर यन्त्र को प्रकार हो कि एक व्यक्ति एक ब्याट्री को सहायता बिना आफै लाई सार्नु पर्छ। तपाइँ सेल्फ प्रोपेल बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागी प्रयोगकर्ता लाई उनीहरुको अंग को उपयोग संग प्रेरित गर्न को लागी आवश्यक छ, र साथी प्रेरित, जसको मतलब यो हो कि तपाइँ एक व्यक्ति को लागी तपाइँलाई धक्का दिनु पर्छ। We विश्वास छ कि प्रयोगकर्ताहरु सबै भन्दा राम्रो पाउन सक्षम हुनेछन् मैन्युअल व्हीलचेयर आफ्नो विशिष्ट आवश्यकताहरु को लागी उपलब्ध छ। दायाँ चयन गर्न व्हीलचेयर उदाहरण को लागी, तपाइँ अनुसन्धान गर्नु पर्छ र निर्णय गर्नु पर्छ कि कुन श्रेणी, मोडेल, र मूल्य बिन्दु तपाइँको जीवन शैली र शर्त को लागी उपयुक्त छ। तपाइँको स्थिति मा निर्भर गर्दछ तपाइँ एक कुर्सी छ कि ठूलो रियर पाels्ग्राहरु छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन सामान्यतया स्व-चालित हुन्छ। यदि तपाइँ एक केयरटेकर छ वा तपाइँ हाल एक हेरचाहकर्ता हुनुहुन्छ, तपाइँ को सानो रियर व्हील संस्करण को रुचि हुन सक्छ व्हीलचेयर, जसमा साथी हैंडलहरु पनि सामेल छन्। हामी तपाइँलाई सबैभन्दा राम्रो खोज्न मद्दत गर्न चाहन्छौं व्हीलचेयर। यो तपाइँ प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता हो। पत्ता लगाउनुहोस् कि हामी तपाइँको लागी के गर्न सक्छौं। हामीलाई आज सम्पर्क गर्नुहोस्!
म्यानुअल व्हीलचेयर विभिन्न सुविधाहरु छन् कि उपकरण अन्तिम प्रयोगकर्ता को लागी उपयुक्त हुन अनुमति दिन्छ। त्यहाँ यी सुविधाहरु र कारणहरु किन प्रत्येक भिन्नता प्रत्येक प्रयोगकर्ता को लागी महत्वपूर्ण छ मा भिन्नताहरु छन्। जब एकaprescribing गतिशीलता उत्पादन, त्यहाँ धेरै निर्णयहरु छन् कि सही कुर्सी चयन गर्न को लागी गर्नु पर्छ। गतिशीलता प्रयोगकर्ताहरु प्रत्येक निर्णय अन्य सुविधाहरु लाई असर पार्नेछ कसरी बुझ्नु पर्छ। सही उत्पादन जानकारी भएको महत्त्वपूर्ण छ। मेरो लागि सबै भन्दा राम्रो सुविधा के हो? मा कर्मान हामी विश्वास गर्छौं कि आराम महत्त्वपूर्ण छ। हामीले प्रदान गर्ने सबैभन्दा सहज कुर्सीहरू हाम्रो एर्गोनोमिक हुन् व्हीलचेयर। उचित ergonomics र एक राम्रो संग सीट कुशन, तपाइँ आनन्द लिनुहुनेछ व्हीलचेयर जीवनको लागि। त्यहाँ अन्य सुविधाहरु छन् कि मन मा राख्न को लागी महत्वपूर्ण छ जब तपाइँ एक खरीद गर्दै हुनुहुन्छ व्हीलचेयर। कृपया एक सम्पर्क गर्नुहोस् बिक्रेता वा हाम्रो उत्पादनहरु को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्। हामी पनि मा चित्रित गरीएको छ डा फिल शो। सेवा को लागी हाम्रो प्रयास असक्षम समुदाय सबैभन्दा राम्रो उत्पादन डिजाइन गरेर शुरू हुन्छ। यो एक डीलर वा DME पेशेवर सोध्न महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाइँ सही छनौट गर्दै हुनुहुन्छ। जब प्रश्न सोध्दै, कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ उल्लेख गर्नुहोस् कि तपाइँ को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले आज गर्नुभएको लगानी तपाइँको जीवनकाल सम्म रहनेछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ एक कम सीट उचाई छनौट गर्नुहुन्छ, तपाइँ ठूला पाels्ग्रा छनौट गर्न सक्नुहुन्न किनकि पाels्ग्राहरु सीट उचाई लाई असर गर्नेछ। अर्को उदाहरण हो, यदि तपाइँ 70 डिग्री footrests छनौट गर्नुहुन्छ तपाइँ 8 ″ casters छनौट गर्न सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ। अक्सर एक को लागी सही कन्फिगरेसन छनौट गर्दै व्हीलचेयर लाग्दो लामो प्रक्रिया हो। हामीलाई थाहा छ गतिशीलता उपकरण अरु कसै भन्दा राम्रो। हामी सम्पूर्ण प्रक्रिया मार्फत तपाइँलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। एक आधारभूत सेट अप छनौट गर्न बाट, तपाइँले छनौट गर्नुभएको सबै सुविधाहरु संग एक गर्न को लागी। हाम्रो उत्पादनहरु को बारे मा अधिक जानकारी को लागी आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाइँलाई सही उत्पादन खोज्न मद्दत गर्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो गर्नेछौं। यदि हाम्रा डीलरहरु मध्ये कुनै पनि तपाइँलाई मद्दत गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने, कृपया हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् र हामी चाँडै तपाइँ संग सम्पर्कमा रहनेछौं। कर्मान राष्ट्रव्यापी सबै ग्राहकहरु को बारे मा ख्याल राख्छ। तपाइँको सन्तुष्टि हाम्रो लागी महत्वपूर्ण छ। हाम्रो उत्पादनहरु को बारे मा धेरै सामान्य प्रश्नहरु को माध्यम बाट हाम्रो उत्तर दिन सकिन्छ बारम्बार सोधिने प्रश्न पृष्ठ। हाम्रो म्यानुअल कुर्सीहरु संग निर्मित छन् गुणस्तर दिमागमा। हामी जान्दछौं कि तपाइँ यो उत्पादन तपाइँको साथ बाकी को लागी हुनेछ तिम्रो जीवन र मा भरोसा गर्नुहोस् गुणस्तर धेरै बर्ष को लागी स्थायी। हाम्रो ग्यारेन्टी पृष्ठ जाँच गर्नुहोस् र आफैं को लागी अरुले के भन्दैछन्। केहि उत्पादन पृष्ठहरुमा हामी पनी समीक्षाहरु छन् कि प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ। हामी बीस बर्ष भन्दा बढी को लागी वरिपरि छौं। हामी उत्पादनहरु को एक विस्तृत श्रृंखला छ कि तपाइँको आवश्यकताहरु को लागी उपयुक्त छ।
पाe्ग्रा को लक्ष्य गतिशीलता
Independent स्वतन्त्र को एक साधन प्रदान गर्नुहोस् गतिशीलता Daily दैनिक गतिविधिहरु को प्रदर्शन को अधिकतम गर्नुहोस् all दिन को समयमा सबै क्षेत्र र वातावरण को सामना गर्न को लागी अनुमति दिनुहोस् neutral तटस्थ मुद्रा को समर्थन प्रदान गर्नुहोस् opt इष्टतम मुद्रा र प्रकार्य को लागी आवश्यक अन्तरिक्ष मा अभिविन्यास प्रदान गर्नुहोस् apt अनुकूली बस्ने प्रणाली को लागी एक आधार प्रदान गर्नुहोस् • प्रदान गर्नुहोस् दबाव राहत को साधन size आकार र तौलमा आवास परिवर्तन
सीमित संग व्यक्तिहरु को लागी गतिशीलता, एक म्यानुअल कुर्सी उपकरण को एक बृद्धि गर्न को लागी एक आवश्यक टुक्रा हो गुणस्तर जीवनको र आन्दोलनको स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुहोस्। विगतमा, व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूका साथै हेरचाह गर्नेहरूका लागि भारी र बोझिलो थियो र प्रायः गतिशीलताको अभाव थियो। आज, निर्माण र डिजाइन मा प्रगति को लागी धन्यवाद, प्रयोगकर्ताहरु लाई अब एक लिफ्ट को लागी प्रतिस्पर्धी शरीर बिल्डरहरु हुन आवश्यक छ व्हीलचेयर सीढीको उडान वा कार ट्रंकमा। हामीले धेरै बुद्धिमानी डिजाइन गरेका छौं व्हीलचेयर बजार को लागी उपयुक्त छ व्हीलचेयर-बाध्य व्यक्तिहरु। हामी हाम्रा उत्पादनहरु को सबै मा विमान ग्रेड एल्युमिनियम को उपयोग गर्ने कोशिश। प्रयोग एक प्रकाश सामाग्री फ्रेम को वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। हाम्रा कम मूल्यका मोडेलहरूमा स्टील र आल्मुनियमको संयोजन हुन सक्छ। तर हाम्रो सबै भन्दा राम्रो व्हीलचेयर एल्युमिनियमबाट बनेका छन्। हामीले जुनसुकै सामग्री प्रयोग गरे पनि, हामी उपलब्ध गराउने प्रयास गर्छौं गुणस्तर उत्पादनहरु। हामी तपाइँको बुझ्छौं गतिशीलता आवश्यकताहरु। एक गैर-बिजुली व्हीलचेयर स्टाइलिश तर पनी लागत प्रभावी हुनुपर्छ। हामी हाम्रो उत्पादनहरु को लागी स्थायित्व र मूल्य को एक सन्तुलन खोज्न को लागी सबै भन्दा राम्रो गर्छौं। यस पृष्ठ को बायाँ छेउमा वजन द्वारा हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरु को जाँच गर्नुहोस्।
हामीलाई एक कल दिनुहोस् यदि तपाइँ एक भेट्टाउन सक्नुहुन्न व्हीलचेयर कि सुविधाहरु छन् कि तपाइँ खोज्दै हुनुहुन्छ। हामी धेरै विकल्पहरु र तपाइँको लागी वैकल्पिक घटक को रूप मा उपलब्ध सामानहरु प्रदान गर्दछौं व्हीलचेयर। Karman मा, हामी "बन्डल" र हाम्रो कुर्सीहरु को लागी धेरै लाभदायक सुविधाहरु को रूप मा शामिल गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् कि तपाइँको गतिशीलता अनुभव पूरा गर्न को लागी बृद्धि गर्न सकिन्छ। हामी आशा गर्छौं कि तपाइँ हाम्रो ठूलो चयन को माध्यम बाट सही उत्पादन पाउनुहुन्छ गतिशीलता उपकरण हाम्रो प्रतिबद्धता व्हीलचेयर उत्कृष्टता हाम्रो कम्पनी को लागी महत्वपूर्ण छ। यो हासिल गर्न को लागी, हामी सधैं हाम्रो सबै भन्दा राम्रो खुट्टा अगाडि राख्ने प्रयास। हामी सबै भन्दा राम्रो उत्पादन खोज्न को लागी उत्पाद समीक्षाहरु पढ्न को सिफारिश गर्दछौं। यो अल्ट्रालाइट हुन सक्छ व्हीलचेयर, वा एक ergonomic व्हीलचेयर। तपाईंले उत्पादनहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन अन्तिम टेक्नोलोजी छ जस्तै खडा व्हीलचेयर। वा तपाइँ मात्र एक साधारण आवश्यकता हुन सक्छ walker तपाइँ तपाइँको हरेक दिन को जीबन संग मद्दत गर्न को लागी। जे होस् मामला हो, Karman यहाँ तपाइँको लागी छ। हाम्रो श्रेणी उत्पादनहरु को सबै जाँच गर्नुहोस्। एक व्यापारी संग परामर्श वा बस हामीलाई कल गर्नुहोस्। म्यानुअल व्हीलचेयर हाम्रो विशेषता हो। व्हीलचेयर को साथ प्रयोगकर्ताहरु लाई प्रदान गर्नुहोस् गतिशीलता आफैलाई प्रेरित गर्न। उनीहरु एक caregiver लाई प्रयोगकर्ता संग सहयोग गर्न को लागी अनुमति दिन्छन् गतिशीलता। हामीले डिजाइनमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका छौं व्हीलचेयर र तिनीहरूलाई हाम्रो कला सुविधाको राज्यमा निर्माण गर्दै। हाम्रो विशेषता हो हल्का म्यानुअल कुर्सीहरु। ती सामान्यतया ३० पाउण्ड मुनिका हुन्छन्। तर हामीसंग केहि पनि छन् जुन २५ पाउण्ड मुनिका छन्। एक हल्का वजन फ्रेम दुवै caregivers र प्रयोगकर्ताहरु लाई मद्दत गर्न सक्छ। को लाभ जबरदस्त छन्। ढुवानी को सजीलो बाट, प्रेरित गर्न को लागी सजीलो गर्न को लागी। उत्पादनहरु को बारे मा अधिक जान्नुहोस्
सही खोज्दै व्हीलचेयर फिट तपाईं धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसैले हामीले नयाँ सुरुवात गरेका छौं ईर्गो फिट उचित मा आधारित अभियान व्हीलचेयर Ergonomics, तुलना र तपाइँको शरीर को आवश्यकताहरु को विपरीत, तपाइँको व्हीलचेयर आयाम, र पनि वातावरण सन्तुलन जहाँ तपाइँ तपाइँको आनन्द लिइरहनु भएको छ व्हीलचेयर। चाहे यो एक बाहिरी अभियान हो, वा सुनिश्चित गर्दै कि एक माथि जाँदै र्याम्प प्रतिरोध को कम से कम राशि संग, वा लामो समय को उपयोग को कारणले सम्भव भएसम्म सहज भएकोले, हाम्रो ईर्गो फिट को एक अनगिन्ती मात्रा प्रदान गर्दछ विकल्प र सामान, वा विशिष्ट विविधता संग मोडेल तपाइँको अधिकतम गर्न को लागी डिजाइन गरीएको हो गतिशीलता र सान्त्वना।
संसाधन - प्रत्येक उत्पादन ल्यान्डि Page पृष्ठ उत्पादन (जस्तै HCPCS कोड, आयाम, साहित्य, UPC, आदि) को लागी सम्बन्धित सबै जानकारी छ। यदि तपाइँ चश्मा र विवरण द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पादन हेर्न चाहानुहुन्छ, कृपया क्लिक गरेर हाम्रो संसाधन ल्यान्डि page पृष्ठ मा जानुहोस् यहाँ. विश्व स्वास्थ्य संगठन - व्हीलचेयर टिकाऊ व्हीलचेयर - सबैभन्दा राम्रो सामग्री के हो? असक्षम - कसरी सही व्हीलचेयर छनौट गर्न कस्तो प्रकारको ह्वीलचेयर सवारी साधन मेरो लागी उत्तम छ? अवतरण पृष्ठ निर्देशिका
यदि यो तपाइँको पहिलो पटक एक को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ मैन्युअल व्हीलचेयर, तपाइँ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ अन्य वेबसाइटहरु तपाइँ राम्रो जानकारी संग सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै विकिपीडिया। हामी यहाँ हाम्रो उत्पादनहरु मा सबै भन्दा राम्रो जानकारी प्रदान गर्न को लागी छौं। एक खोज्दै मैन्युअल व्हीलचेयर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी मध्ये एक हो। तपाइँ धेरै कारकहरु द्वारा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। केहि मूल्य मा हेर्छन्। जबकि अरूले वजन खोज्छन्। सबैको फरक प्राथमिकता हुन्छ। म्यानुअल कुर्सीहरु आकार र आकार को सबै प्रकार मा आउँछ। केही म्यानुअल कुर्सीहरू 30 इन्च चौडाइमा जान सक्छन्। अन्य म्यानुअल कुर्सीहरू फ्रेम वजनमा मात्र 14.5 पाउन्ड छन्। सबै ब्रान्डहरूसँग विस्तृत चयन छैन व्हीलचेयरतर हामीसँग सबै प्रकारका छन् व्हीलचेयर। तपाईंले खरिद गर्नु अघि हाम्रो उत्पादन भिडियोहरू हेर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरूले तपाईंलाई हाम्रा उत्पादनहरूको बारेमा थप जानकारी दिनेछन्। यसले उत्पादन कसरी फोल्ड गर्छ वा कसरी गर्ने भन्ने देखाउने समावेश गर्दछ झुकावaव्हीलचेयर। यसलाई जाँच गर्नुहोस् youtube.com/karmanhealthcare। हाम्रो Youtube च्यानल को सदस्यता लिनुहोस् जहाँ हामी तपाइँलाई सूचित गर्नेछौं जब हाम्रो च्यानल मा एक नयाँ भिडियो पोस्ट गरीयो। यो तपाइँको कुर्सी को सेवा गर्ने को बारे मा जान्न को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एक किन्ने गतिशीलता उत्पादनहरू आजकल सजिलो छ। तपाइँ सजिलै संग एक कुर्सी अनलाइन किन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा आधिकारिक डीलरहरूले सामान्यतया निःशुल्क ढुवानी प्रस्ताव गर्छन्। अनलाइन खरिद गर्नुको अर्थ हो कि तपाईंले हाम्रा उत्पादनहरू खरिद गर्न आफ्नो घरको आराम छोड्नु पर्दैन। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ भने तपाइँले हामीलाई कल दिनु पर्छ। तपाइँ पनि हाम्रो डीलर लोकेटर को माध्यम बाट एक स्थानीय व्यापारी पाउन सक्नुहुन्छ। हामी सधैं हाम्रा ग्राहकहरु लाई सिफारिशहरु गर्छौं। यस प्रकारको उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गर्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू समावेश छन्: तौल वर्ग र उत्पादन प्रकार। म्यानुअल व्हीलचेयर सामान्यतया3फरक वजन वर्गहरू छन्। मानक वजन, हल्का वजन, र अल्ट्रालाइट वजन। सेल्फ प्रोपेल्ड कुर्सीहरूको पनि कोटीहरू छन्। यो बेरिएट्रिक, झर्नु वा उच्च फिर्ता सामेल छन्। त्यहाँ एक चिकित्सा अवस्था छ? प्रयोगकर्ताले दैनिक क्रियाकलाप कसरी गर्छ? के प्रयोगकर्ता स्वतन्त्र छ? हामी संग छ व्हीलचेयर युवा र वृद्ध दुवै सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको लागि बनाइएको। सबै उमेर समूहहरूले म्यानुअल कुर्सीहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। यो पहिलो मापन गाइड प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ। एक खरीद गर्दा एक उचित फिट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो व्हीलचेयर। एक गतिशीलता कुर्सी एक व्यक्तिको शरीर को एक विस्तार हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी आराम मा ध्यान केन्द्रित। के व्यक्ति अब सहज छ? त्यहाँ उचित ergonomics छ? के व्यक्ति झुकेको छ? एक साधारण व्यक्ति जस्तै एक कार्यालय मा एक डेस्क मा बसे। उचित ergonomics धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। पछि हामी ती चीजहरु लाई संकुचित गरेका छौं, यो सजिलो छ। हामी तब सोध्न सक्छौं कि के उत्पादनहरु लाई अधिक प्रस्ताव छ लाभ? त्यहाँ एक हल्का मोडेल छ? वा ग्राहक केहि पैसा बचाउन चाहान्छ? केहि म्यानुअल कुर्सीहरु मात्र अस्थायी रूपमा प्रयोग गरीन्छ। यस अवस्थामा, हाम्रा विशेषज्ञहरु बजेट भित्र रहन को लागी सिफारिश गर्न सक्छन्। अन्य गैर -स्वचालित व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु सबै भन्दा राम्रो माग। एक क्यानोपी वा हेडरेस्ट भएकोले लागत जोड्दछ। तर एकै समयमा, यो तपाइँको सवारी अधिक आरामदायक बनाउँछ। त्यो हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँको लागी सही फिट खोज्न को लागी। केहि प्रयोगकर्ताहरु एक नरम सवारी चाहान्छन्। अरुलाई थाहा छ कि एक राम्रो सीट बेल्ट महत्वपूर्ण छ। हामी कहिलेकाहीँ प्राप्त गर्छौं अनुकूलन आदेश। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो! हामी मद्दत गर्न चाहन्छौं। यो मात्र राम्रो संचार लिन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको डीलर लाई तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ बताउनुहोस्। हामी सबै उमेर को ग्राहकहरु छन्। न केवल त्यो, हामी बिभिन्न शर्तहरु संग ग्राहकहरु छन्। यसैले हामी १०० भन्दा बढी मोडेलहरु छन्। तपाइँ अर्को दिन तपाइँको ढोकामा डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा धेरै डीलरहरु सित्तै ढुवानी प्रदान गर्छन्। केहि व्यापारीहरु लाई २ दिन को लागी नि: शुल्क शिपिंग को प्रस्ताव छ। प्रत्येक व्यापारी एक Karman उत्पादन मा अन्त प्रयोगकर्ता को लागी एक विशेष प्रस्ताव छ।
[yrw business_id = "soFg6MiHeYaPSwbgWAC8ig" refresh_reviews = true open_link = true nofollow_link = true]